ဇီ (ဇီ) - အာရှအလယ်ပိုင်းတစ်ဦးအမွှေးအကြိုင်ဇာတိ။ တောင်ဘက်-အရှေ့အာရှ, မြောက်အာဖရိကနှင့်လက်တင်အမေရိက၏အမျိုးသားရေးအစားအစာအတွက်စက်ရုံကျယ်ပြန့်စိုက်ပျိုး။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များတွင်အမွှေးအကြိုင်ဇီဥရောပအစားအစာအတွက်အသုံးပြုသည်။
Kirmanchi - ဆိုးရွားစွာ, အသေးစားအနက်ရောင်အမွှေးအကြိုင်အနံ့;
ရှ - မွှေးကြိုင်အနည်းငယ်အဝါရောင်-ရောင်စုံအမွှေးအကြိုင်။
paprika, နနွင်းနဲ့တခြားမွှေးနံ့သာ: အရှေ့ဇီတွင်နံ့သာမျိုးကိုတခြားအမျိုးအစားများနှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုသည်။
Zira: Properties ကို
အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်မွှေးကြိုင်နှင့်စားနပ်ရိက္ခာဖြည့်စွက်အဖြစ်နှင့်ထိရောက်သောမူးယစ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်ဘယ်မှာရှေးခေတ်ဂရိနိုင်ငံနှင့်ရောမမြို့အတွက်တန်ဖိုးထားဇီ။ တကယ်တော့ဇီကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် curative ဂုဏ်သတ္တိများ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ ဒါဟာအမွှေးအကြိုင်အစာခြေခြင်းနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များ (အသက်ရှိများ၏ကွဲပြားခြားနားသောစနစ်များမှတဆင့်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တ္ထုများဖယ်ရှားရေး) တိုးတက်ကြောင်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါနှလုံးသွေးကြောစနစ်၏အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ရောဂါများနှင့်အတူသူတို့က, သငျသညျလညျးအံ့သြဖွယ်စက်ရုံဖြစ်ပါတယ်အစားအစာထဲမှာထည့်သွင်းဖို့အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါမြေပြင်ဇီသူနာပြုမိခင်များအတွက်နို့ကိုအားပေးအားမြှောက်, အစားအစာမှဆက်ပြောသည်။
ရှေးခေတ်ကထံမှဇီမျိုးစပါးများမှာ aphrodisiacs ဒါကြောင့်အစားအစာနှင့်အချိုရည် zira လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ excite ရန်နည်းလမ်းအဖြစ်အကြံပြုနိုင်ပါသည်။
ကလေးအထူးကုကလေးငယ်အတွက်လေ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အဇီတစ်ဦး decoction အကြံပြုပါသည်။
ဇီအများအပြားဗီတာမင် (အီး, C, A, B6 ဟာ, B2) နှင့်သတ္တုဓာတ် (စသည်တို့ကိုပိုတက်စီယမ်, ကယ်လစီယမ်, သွပ်, ဆယ်လီနီယမ်, သံ,) ပါရှိသည်။
ပိုကောင်းတဲ့စက်ရုံအထုပ်ထဲမှာထုပ်ပိုးနေတဲ့ရာသီဝယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကစျေးကွက်အပေါ်ဇီဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်အနည်းငယ်မျိုးစပါးပွတ်သပ်ရန်သေချာစေပါ။ ရန် အလွန်သာယာသောလတ်ဆတ်သောနံ့သာမျိုး၏အနံ့။ တခြားရာသီမတူဘဲ zira, အချိန်ကြာမြင့်စွာသိုလှောင်မှုကိုဆီးတားမရနိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများကအောက်အနံ့အပေါ်ယူနေသမျှကာလပတ်လုံးမွှေးမျိုးစေ့များနှင့်ဆန်ဇီအိမ်မှာ, 1 လထက်ပိုပြီးကိုင်ကြဘူးစောင့်ရှောက်ဖို့မအကြံပြုသည်။
အဘယ်အရာကိုဟင်းလျာများ၌သငျဇီ add နိုင်သလဲ
ပုံမှန်အားဖြင့်, ဇီအသားနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းလျာများထည့်သွင်းထားသည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်အဘိဓါန် Uzbek- pilaf, စိတ်ကူးဖို့ခဲယဉ်းသည် အိန္ဒိယဟင်း , Azeri kebab ဇီမရှိဘဲ။ ဿုံနူးညံ့သိမ်မွေ့အမွှေးအကြိုင်ကင်သို့မဟုတ်ကင်၏အရသာကို underscore ။ အတော်များများမီးဖုတ်ထားသောပင်လယ်ငါးကိုလည်းအမွှေးအကြိုင်သုံးနိုငျသညျ့အခါကယုံကြည်ကြသည်။
ဥရောပနိုင်ငံများတွင်လူဦးအထူးသဖြင့်အစားအစာကိုခရမ်းချဉ်သီး၏ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်လက်ဆောင်ပါလျှင်, စွပ်ပြုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူဇီမျိုးစပါးကိုအသုံးပြုပါ။ ဘယ်လိုဇီထို့အပြင်မီးဖုတ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်စည်သွပ်ဗူးအတွက်အသုံးပြုသည်။
ဆန်မျိုးစပါးနို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များ၏အရသာ ennoble ။
ကြက်သားအသည်းနှင့် zira နှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
အသည်း (ကြက်သား) - 300 ဂရမ်;
တဦးတည်းဟင်းသီးဟင်းရွက် (မုန်လာဥနီ, ကြက်သွန်, ငယ်ရွယ် zucchini);
ဆလရီ - 1 အညှာ;
parsnip - အမြစ်တစ်ဝက်;
ကြက်သွန်ဖြူ - အနည်းငယ်လေးညှင်းပွင့;
ပဲပိစပ်ဆော့စ် - 1 tbsp ။ ဇွန်း,
ဇီ - ကိုမြည်းစမ်းဖို့။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီကြော်ကုန်တယ်မုန်လာဥကြက်သွန်နီ, ထို့နောက်အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက် add အပေါင်းတို့, ငွိမျး။ ဒါဟာအဆုံး၌အသည်းနှင့်ပဲပိစပ်ဆော့စ်ကိုထည့်လေ့မရှိ - ထိုကြက်သွန်ဖြူ။
ဒိန်ချဉ်၏0င်,5လီတာ;
မြေပြင်အနက်ရောင်ဇီ - pinch ၏စုံတွဲတစ်တွဲ။
အဆိုပါဒိန်ချဉ်ထုကိုက် Mint အရွက် Blender သို့မဟုတ် whisk ရောမွှေ, သံပုရာဖျော်ရည်နှင့်အတူအက်စစ်ရေကိုထည့်သွင်းထားသည်။ သွန်းလောင်းဖန်ခွက်ခြင်းဖြင့်ထုတ်ပေးသောအခါမြေပြင်ကိုဇီကဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသောက်ဿုံအပူဆုံးရာသီဥတု၌သင်တို့ကို refresh လုပ်ပြီး invigorate!
အဆိုပါ pilaf ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ပိုးစာရှာလကာရည် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ကုန်ကြမ်း form မှာသရက်သီးစားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဘယ်အရာကို kefir ကနေဖုတ်နိုင်မလဲ?
သီး၏ compote ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မှိုချက်ပြုတ်ဖို့ကိုဘယ်လို - အရသာဟင်းလျာများ၏အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများပြင်ဆင်နေ၏မှိုနှင့်နည်းလမ်းများ
ဝီစကီနှင့်အတူကော့တေး - တိုင်းအရသာများအတွက်အချိုရည်၏မူလအိုင်ဒီယာအမျိုးမျိုး
Aspic ကြက်သား gelatin
2014 ခုနှစ်ရှည်လျားသောဆံပင်ပေါ် Bang
Intimissimi bra ချွတ်ချွတ်
Charlize Theron သူမ၏ဘရာစီယာအမျိုးသမီး flash ကိုလူအုပ်စုပြသ
စနစ်တကျအဝတ်သေတ္တာထုပ်ပိုး - အားလုံး fit!
သားအိမ် cyst ၏ဖယ်ရှားရေး
George Clooney ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ဇနီး Amal ၏ "နေအိမ်အကျယ်ချုပ်" အောက်မှာခဲ့သည်
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ windbreaker 2015